DEG-DEG: Arsenal Oo Ku Dhawaaqday Ciyaartoyga Ku Guulaystay Abaal Marinta Xidigii Kooxdeeda Xili Ciyaareedkan Ugu Fiicnaa. - Gool24.Net
DEG-DEG: Arsenal Oo Ku Dhawaaqday Ciyaartoyga Ku Guulaystay Abaal Marinta Xidigii Kooxdeeda Xili Ciyaareedkan Ugu Fiicnaa.
August 8, 2020 Mahamoud Batalaale
Kooxda Arsenal ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday xidiga ku guulaystay abaal marinta xidiga kooxdeeda ee xili ciyaareedkan ugu fiicnaa. Arsenal ayaa hore taageerayaasha kooxdeeda ula wadaagtay liiska musharixiintii tartamayay.
Pierre-Emerick Aubameyang oo Arsenal ka caawiyay in ay finalkii FA Cupka ku garaaceen Chelsea isla markaana ay koobkan ku guulaysteen ayaa loo doortay in uu ahaa laacibkii xili ciyaareedkan kooxdiisa Gunners ugu fiicnaa.
War rasmi ah oo Arsenal ka soo baxay ayaa lagu shaaciyay in Pierre-Emerick Aubameyang uu ku guulaystay abaal marinta xili ciyaareedkan kooxdooda ugu fiicnaa.
Warka Arsenal ku shaacisay guusha Auba ayaa lagu yidhi: “Waxaanu hadda shaacin karnaa ciyaartoygii xili ciyaareedka 2019/2020 ugu fiicnaa ee ka taageerayaal u codayseen”.
“Guulaystaheena codka aqlabiyada ahi waa Pierre-Emerick Aubameyang kaas oo ku soo raaxaystay xil ciyaareed cajiib ah ee casaanka iyo cadaanka isla markana ku guulaystay boqolkiiba 74% codkii la bixiyay”.
“Auba waxa uu markale xili ciyaareedka ku dhamaystay isaga oo ah gool dhaliyaha ugu sareeya isaga oo magiciisa ku qoray 29 gool wuxuuna inagu hogaamiyay koobkeenii 14 aad ee Emirates FA Cup ee kadib labadii gool ee uu afar dhamaadkii kaga dhaliyay Machester City iyo labadii gool ee kale ee uu Chelsea kaga dhaliyay finalka”.
Waxaana qoraalka Arsenal lagu soo xidhay: Hambalyo Auba!”
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa hadda qarka u saraan in uu saxiixo heshiis cusub oo saddex sanadood ku sii hayn doono Emirates Stadium kadib markii uu ogolaaday in uu meesha ka saaro shakigii mustaqbalkiisa hadheeyay.